पाकिस्तानमा के गर्दैछन् प्रधानसेनापति क्षेत्री? :: PahiloPost
पाकिस्तानमा के गर्दैछन् प्रधानसेनापति क्षेत्री?
16th May 2018, 08:57 pm | २ जेठ २०७५
काठमाडौं : प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री पाकिस्तानमा पुगेका छन्। मंगलबार पाकिस्तान पुगेका क्षेत्रीले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शाहीद खकान अब्बासीसँग भेट वार्ता गरेका छन्।
मंगलबार पाकिस्तानको तीन दिने भ्रमणमा पुगेका उनले भेटमा उनले पाकिस्तानले नेपालमा गएको भूकम्पपछिको उद्दारमा पाकिस्तानले पुर्‍याएको योगदानको लागि धन्यवाद दिएका छन्।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले प्रधानसेनापति क्षेत्रीसँगको भेटमा नेपाललाई दिँइदै आएको सहयोग बढाउने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन्।
यसैबीच प्रधानसेनापति क्षेत्रीले पाकिस्तानको डिफेन्स एक्सपोर्ट प्रोमोसन अर्गनाइजेसनको समेत अवलोकन गरेका छन्। त्यहाँको रक्षा उद्योगको विषयमा उनले जानकारी लिएका थिए। त्यस्तै प्रधानसेनापति क्षेत्रीले त्यहाँका रक्षामन्त्री खुरर्म दस्तागीर खानसँग समेत शिष्टाचार भेट गरेका छन्।
भेटमा त्यहाँका रक्षामन्त्रीले नेपालको सैन्य क्षेत्रमा सहयोग बढाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। त्यहाँका जोइन्ट चिफ अफ स्टाफ कमिटीका अध्यक्ष जनरल जुरी मोहम्मद ह्यातसँग भेटवार्ता गरेका छन्। भेटमा दुई देशका सैन्य क्षेत्रमा आपसी साझेदारी बढाउँदै सैन्य कुटनीतिलाई मजबुत बनाउने विषयमा छलफल भएको पाकिस्तानी दुतावासले जनाएको छ।
पाकिस्तान भ्रमणका रहेका प्रधानसेनापति क्षेत्रीलाई त्यहाँको सैनिकले सम्मान स्वरुप गार्डअफ अनर प्रदान गरेको थियो।
पाकिस्तानमा के गर्दैछन् प्रधानसेनापति क्षेत्री? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।